Indlela yokufihla isigaba se-raster-Geofumed
Indlela yokufihla isigaba se-raster
NgoFebruwari, 2009 cadastre, Microstation-Bentley
Ndizama ukuchazela lo mqeqeshi ongekho ikhompyutha kwimizuzu engamahhafu, kodwa ekubeni ndiyathanda kangcono, ndibhalela inkqubo apha kwaye iququzelele i-consultancies yamahhala.
Unemifanekiso engemvelaphi, kodwa ufuna ukufihla inxalenye yayo yokunyathelisa kunye nenjongo yokunikezela. I-Microstation V8.5
Ngaphambi kokuba ndixoxe ngendlela yokwenza into oku kunye neDescartes, kodwa ngenjongo yokudibanisa i-raster eninzi kwaye uyisindise njengemifanekiso emitsha. Kule meko, akuyona into efunekayo ngokukodwa kuba iinjongo zokubonwa kuphela, ayihloselwe ukusika imifanekiso.
Ngoko ukhetho ukukwenza ngokusebenzisa i-clip ye raster.
Kumphathi weRaster, ukhetha imifanekiso ofuna ukuyifihla kunye ne "Hlela / isiqeshana"
Emva koko kukho iwindi elincinane elibuzayo:
... ufuna ukwenza isiqulatho, ungatsho na kwi-???, uze ukhethe indlela yokusika kunye nemodi.
1. Ngendlela ethile
Unako ukukhangela into echongiweyo, into evelelwe njengefolgoni. Ngoko ke sakhetha inketho ye-Element, kwaye emva koko iCompound Boundary; le yiphumo
Emva kokuba ukhethe uhlobo lento (indlela) ofihlayo, uchaza ukuba ufuna ukufihla ngaphakathi, okanye umda. Ngokuba ezi zikhetho ezimbini:
Isiqeshana seMask, sifihla ngaphakathi
IsiGqeba seMpawu, sifihla ngaphandle
2. Ngendlela yokudweba
Kule meko, kunokwenzeka ukwenza itafile ngaphandle kokuba ube nenjongo, ngenxa yoko ukhetha "Vimba" kwaye umaka ibhokisi nge mouse. Emva koko uqakraza entsha ukubona umphumo.
Ukuba ifowuni ikhona, inokuthi ikwazi "ukukhukhula" kunye neendawo ezinokubaluleka kumanani amaninzi okanye imingcele engeyiyo ifom evuliwe. Okokuqala ucingo kufuneka lwenziwe, kwaye ngoko unokukhethwa kwi-"Indlela".
Umfanekiso olandelayo ubonisa iziqephu ezihlukeneyo ezenziwe, obomvu kunye neendlela "Element", owela "ngeFence", abanye "banqanda". Kwaye wonke umntu unokuhlala kunye, umfanekiso ufana.
Olu cingo luncedo kakhulu, kuba kwi-Microstation XM okanye kwiV8i iinguqulelo ezicingo zingagcinwa ngokungathi ziyimodeli.
Kukho kwakhona "ukuguqula ikhetshana" inketho evumela ukuba uhlele izilwanyana, njengokuba ndenze enye yeebhokisi. Ukucima esinye seziqeshana, sebenzisa "hlela / ungafaki" kwaye ungakhetha ngamnye okanye yonke imida.
Isishwankathelo senkqubo yokungekona iteknoloji; Kule meko, kukho umfanekiso okhutshwe kwiGoogle Earth, kwaye ufuna ukuwunqumla ngokumalunga nemephu ye-1: 10,000
1. Shayela i-raster
2. Mthintele kumphathi we-raster
3. Hlela / isiqwenga
4. Khetha Indlela "Vimba"
5. Khetha Imodi "IsiKhokelo seSikripthi"
6. Yenza ibhokisi nge mouse: Ukuqalisa i-snap press ctrl + shift
7. Cofa kwesikrini
Ngenxa ye nyaniso yokuba le quadrant akuyena nje umxube, ungakhetha "ukuhlela / ukuguqula isiqwenga" kwaye iziphelo zithunyelwa kuma-equines ahambelanayo, rhoqo nge-snap esebenzayo ye-ctrl + shift
Mntu, ndiyathemba ukuba nangona isiselo esiphuzo, siwa phantsi xa beza apha ... kuba oku kufundwayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo ProgeCAD, enye indlela eya ku-AutoCAD
Post Next I-Geofumadas ifuna isiSpanish kwisihumushi sesiNgesiOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Indlela yokufihla inxalenye ye-raster"
Mkhulu, ungaze ufe, into eninzi yoluntu 3d ungayikhohlwa. mbulela
wilson borjas uthi:
kungeyona nje into emnandi, kodwa isidlo sasemini.
Ndicinga indlela endithatha ngayo ixesha lokwenza oku okufundisayo ...